समस्या नै समस्याले भरिएको हुन्छ यस्ता मानिसको वैवाहिक जीवन - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
कुनैपनि व्यक्तिको हातमा भएको विवाह रेखाले उसको वैवाहिक जीवनको बारेमा संकेत गर्दछ । विवाह रेखाको बनावट, प्रकार, उसको प्रगतिलगायत वैवाहिक जीवनलाई समेत प्रभावित गर्दछ ।
पं. शिवकुमार शर्माका अनुसार विवाह रेखा सबैभन्दा सानो औँलाको तल हुन्छ । हातमा विवाहको रेखा हुन्छ, यसको मतलब यो हुन्छ कि उ प्रेम प्रसंगमा फँसिरहन्छन् । जसको विवाह रेखा तल झुकेको हुन्छ उसको वैवाहिक जीवन समस्याले भरिएको हुन्छ ।
पं. शर्माका अनुसार जसको दुबै हातमा विवाहको रेखा दुई शाखामा बाँडिएको हुन्छ उनको विवाह भत्किने खतरा हुन्छ । जसको हातमा विवाह रेखा तल र झुकेको हुन्छ यस्ता मानिसको साथी उसको स्थिति रहँदै वित्न सक्छिन् । जसको विवाह रेखा बीचमा छुट्टीएको छ उनको विवाह पनि विच्छेद हुने खतरा हुन्छ ।
जसको विवाह रेखामा सर्प जस्तै जीवजस्तै दुई शाखा हुन्छ उसको साथीसँग मतभेद रहन्छ । जुन केटाको हातमा एक विवाह रेखा हुन्छ उनको जीवनसंगीनी धेरै माया गर्छिन् । जसको दायाँ हातमा दुई वा बायाँ हातमा एक विवाह रेखा हुन्छ यस्ता मानिसको पत्नी धेरै ख्याल गर्ने हुन्छिन् ।